[Ankapobeny ] 20 Martsa, 2009 10:12
Hiditra @ krizy ekonomika @zay
Vita vita iny ny krizy politika hoy ny maro kanefa mbola kivy ihany ny rehetra satria mitatao ny loza ekonomika indray i Madagasikara ankehitriny.
Hiato daholo mantsy ny fanampiana avy @ ireo firenen-dehibe rehetra tsy mankasitraka ilay fanoganam-panjakana nisy teto iny. Voalohany @ ireny i Norvezy, USA sy ny UE, ary ny Sadc sy ny UA.Nanigana kosa i Lafrantsa tsy mahagaga intsony satria izy no tao ambadik'ireny korotana ireny. Hahavita tena ary ve ny fanjakana tetezamita?
Hikatona ihany koa ny Usaid, ny CRS, ny CI sy ireo organisma tantan'ireo amerikana eto Madagasikara. Ny peace corps moa dia efa tsy eto intsony. Olona firy indray izany no very asa ary olona nikarama tsy vary masaka akory fa tena tsara karama daholo ny mpiasa @ ireny organisma amerikanina ireny.
Mahamenatra ihany koa ny fihetsika nataon'ny Capsat nandroba ny entana sy ny fanaka ary ny fiara miisa 3 tao @ tranon'ny Filoha ny repoblika teo aloha tetsy Faravohitra. Dia tena tsy misy hasiny intsony izany fihavanana nampalaza ny malagasy izany. Mbola resabe rahateo ny nahazo ny daroka sy ny fampijalina ny filoha ny FJKM. namaly moa ilay Kaomada tao oe lainga avokoa ny voalazan'i Lala Rasendrahasina (ela ela izy vao nilaza oe Pasitora) dia mbola nampiny oe tsy mendrika ny ho pasitora raha enao (mba tsy nataony ela) iny.
(Lafrantsa no ao ambadiky ny tolona)
Hamono omby 50 ny mpitolona rahampitso @ ilay fety etsy mahamasina. Nofon-kena mitam-pihavanana hono no atao mantsy. Tsy afaka ny hisalotra ny samboady moa ny filoha ny tetezamita satria tsy voafidim-bahoaka. Efa tsy andrin'ny tgv mihitsy io lanonam-be io izao. asa na ahafeno kianja na tsia? Eo isika mahita izy ozy.
Ho vasoka eo mantsy satria ny FJKM dia hanao vavaka ho an'ny firenena eo Mahamasina ihany koa @ alahady 29 marsa 2009. Na dia zavatra tsy fampitàha aza dia ohatra tiako ihany ny hanao izany satria tena mba voa mafy mihitsy ny FJKM tato ato izay. Soa ihany fa ny fitorina an'i Jesoa Kristy no atao fa tsy hanao fikomina akory na dia mbola tsy nilaza mivantana ny fanekena izao fitondrana izao ary ny fjkm. Nanameloka tanteraka ilay fihetsika mamaofady ihany koa ny FFKM ary mitaky ny hisiny filaminana @ izay.
Toa niala sahady koa ilay minisitra tetezamita misahana ny fiarovana! mahagaga ihany tsy mbola niasa akory dia nitsoaka an-daharana sahady sa kosa efa tonga saina fa tsy hisy hankato izao fanonganam-panjakana izao ny firenena hafa ka hanahirana ny hisahana ny fiarovana ao aorina ao. Manomboka koa ny ady seza satria dia vonona mba haka ny sezany koa Ingahy Ranjivason vao nivoaka ny fonja izy dia izay no teniny voalohany. Ka any @ Monja rondefo zany ny baolina zao. Tapitra ihany koa ny tolona ka vita hatreo ny ilàna ireo kitoza (olona eny @ faritra iva) nafana fo be t@ tolona ireny ka tsy hita izao izay seza sahaza azy ireny. Ireo mpanao politika rehetra mila anjara mofo mamy koa aza misy adinoina sao mitarika olona hikomy eo koa vao zava-doza eo. Manomboka tokoa ny fizaram-potoana faharoa hoy mpivazivazy izay.